IGraffiti kunye nobudlelwane bayo noyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Igraffiti yile ukubonakaliswa mhlawumbi komyalezo, uphawu, iqela lomculo okanye umhla kwaye yile nto njengoko sele sisazi, igrafiti yinxalenye yenkcubeko yasezidolophini. Ngaphandle kokohlwaywa ngumthetho, kwamanye amazwe sinokubona intabalala yemisebenzi esezindongeni zezo ntlanga. Lo nto, I-graffiti ithathwa njengentetho yobugcisa ngaphakathi kwenkcubeko yenkcubeko kunye nakwezinye iinkcubeko.
Kodwa ekugqibeleni, njengentetho ebonakalayo, igrafiti yindlela yokubonisa, kusetyenziswa iqela labantu ukuthumela umyalezo.
1 Ngaba uyilo lwemizobo lunantoni yokwenza negrafiti?
2 Umdibaniso wegrafiti kunye noyilo lwegraphic
Ngaba uyilo lwemizobo lunantoni yokwenza negrafiti?
IGraffiti iya kudityaniswa noyilo lwegraphic phantse ngokungagqibekanga kwaye oko kukuthi le yindlela yokuthetha esidlangalaleni. Kuyenzeka ukuba uqaphele ukufana phakathi kwegrafiti kunye noyilo lwegraphic, umba namhlanje ongenakuphikiswa phantse kuye nakubani na okho kwezi zinto zimbini.
Zombini igrafiti kunye noyilo qonda intetho ngemifanekiso kwaye bobabini badibanisa ulwazi oluthile ngokubonisa, bobabini banokuhambisa umyalezo. Zombini igrafiti kunye noyilo lwegraphic Ziqulathe uthotho lwezikhokelo ngokwandiswa kwayo, nangona kunjalo, mhlawumbi akuyomfuneko ukuchaza oko kuyilo lwegraphic Izikhokelo zineendlela ezisesikweni ngakumbikanti kwigrafiti oku akunjalo. Kwelinye icala, igrafiti inokuqondwa njenge ubugcisa bentengiso, unikwe lonke uhlobo lolwazi olunokudluliselwa kuyo.
Ndiyabulela koku, igrafiti sele isekiwe ngokuthe ngcembe ngaphakathi kwindawo yoyilo, bethathela ingqalelo ngakumbi nangakumbi kwiinkqubo zoyilo ezinezikhokelo zegrafiti kwiimpawu zazo zendlela. Sele sithethile malunga negraffiti nanjengoko Indawo yobungcali yoyilo lwegraphic, kwaye oku kufanele ukwenziwa, kubuze ukuthandabuza abantu ababeka iigrafiti njengembonakalo yemvukelo okanye uqhankqalazo Ewe, kukho iinkcubeko ezininzi ezisebenzisa le ntetho yobugcisa njengesiqhelo.
Ukuhlaziywa kwegrafiti kube mkhulu kangangokuba namhlanje kuthathelwa ingqalelo njengezikhokelo ze imodeli yobungcali, ukwenza le yenye yezona ndawo zibalulekileyo zolwazi kuyilo lwegraphic, usiya ekubeni yintetho yobugcisa uye kwintsika yoyilo lwegraphic. Ke ngoko, kuqhelekile ukufumana abantu abayithandayo inkcubeko yasezidolophini abasebenza kwindawo yoyilo lwegraphic, kunye nabantu abaziingcali kwindawo yoyilo lwegraphic abangena kwihlabathi legrafiti, bekhangela entsha ubuchule bokwenza iimodeli, kunye nokukhangela iimodeli zesalathiso ezintsha zokuphucula iifonti ezinomtsalane okanye ezizodwa kwiiprojekthi zazo.
Umdibaniso wegrafiti kunye noyilo lwegraphic
Ke, ukudityaniswa kobugcisa begrafiti kunye noyilo lwegraphic kunike ukonyuka uyilo olutsha kunye nobuchule, ethi namhlanje isinike inani elikhulu leemodeli zangoku ezisetyenziswa kwiinkampani ezinkulu, okuthetha indawo entsha yoyilo kunye negrafiti uqobo.
IGraffiti kule mihla Inkqubo yoyilo lwegraphic njengobuchule njengayo nayiphi na enye. Kananjalo, ukuthandwa kwayo kunika ababhali ngasemva koyilo lwegrafiti kwindawo yoyilo lwegraphic ulwamkelo olukhulu, ngenxa yokuba namhlanje le meko yedolophu inxulunyaniswa neemodeli ezintle ezifanele ukuhlalutya. Enye yeengqwalaselo eziphambili zobugcisa begrafiti namhlanje enye yeendlela eziphambili kwindawo yoyilo, kuba uninzi lwamalungu ayo lunokuthi luqwalasele ulutsha, lukhuthaze umbulelo ngokusekwa kobugcisa babo.
Igrafiti kunye noyilo lwegraphic bahamba bebambene ngezandla namhlanje Kwaye ezi ndlela zimbini zixubene neendlela zabo, abasebenzisi kunye nabathandekayo, oko kukuthi, uyilo kunye negrafiti ndinike iqela elitsha labayili abathandi bemifanekiso ephucukileyo edolophini ngamandla amakhulu ngaphakathi kwindawo yorhwebo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » IGraffiti kunye nobudlelwane bayo noyilo lwegraphic
Luluphi ulwalathiso olulandelwa kuyilo lwegraphic?